Isicwangciso-nkqubo sooMasipala | Local Government Action
Unelungelo phantsi koMgaqo-siseko lokuba nomasipala osebenzayo, obonelelayo ngeenkonzo ezisisiseko nokhuthaza ukuphuhla koluntu kwanoloqoqosho. Unelungelo phantsi koMgaqo-siseko lokuphathwa ngurhulumente kamasipala olawulwa ngokwentando yesininzi kwanalawo uphendulayo eluntwini. Kodwa ke oomasipala bayasilela ekunikeleni ngeenkonzo esinelungelo lokuzifumana.
Isicwangciso-nkqubo sooMasipala sijolise ekuncedeni wena:
umqonde umasipala kunye noko afanele ukuba ukwenzela uluntu ngalunye
uhlole (okanye ulandelele) oko kwenziwa ngumasipala
ufumanise oko ufanele ukwenze xa umasipala engalusele-so uluntu okanye eyityeshela imigaqo
yenza inyathelo ukunyanzelisa amalungelo akho okufumana amanzi, ugutyulo, umbane, indlu, kunye nonakekelo lwempilo,
ufumane imibutho enokukunceda.
Sebenzisa imenyu yeSikhokelo samaTshantliziyo ukuze ukhethe icandelo elo ulifunayo kwanokufumana iinkcukacha ozifunayo.
Eli candelo liza kukunika isishwankathelo sendlela eyenziwa kwanenyanzeliswa ngayo imithetho eMzantsi Afrika. Ezi nkcukacha ziza kukunceda uwaqonde amalungelo akho xa usebenzisana nomasipala.
Umasipala uquka ooceba, amagosa kumasipala kunye nabantu abahlala kuloo masipala, abaquka abahlali, imibutho yoluntu (iiCOB) kunye noosomashishini.
Iinkqubo ezingundoqo kumasipala wena ofanele uthathe inxaxheba kuzo ukuze uqinisekise ukuba iimfuno zendawo ohlala kuyo kuyahlangatyezwana nazo nokuba izinto ezingundoqo ziyenziwa.
Ulwazi lubalulekile ukuze ukwazi ukuwaqonda amalungelo akho. Kodwa ingaba oku kwanele. Enye yezona ndlela ziphambili zokwenza umasipala wakho abe nokunika iimpendulo eluntwini kukwenza uluntu lubumbane ukuze niqinisekise ukuba niyazifumana iinkonzo ezisisiseko.